Chelsea Oo Shaqada Ka Eriday Tababare Antonio Conte iyo Sarri Oo La Magacaabayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea Oo Shaqada Ka Eriday Tababare Antonio Conte iyo Sarri Oo La Magacaabayo
(12-7-2018) Kooxda Chelsea ayaa ugu danbayn shaqadii kooxdeeda ka caydhisay Antonio Conte waxayna hadda qarka u saaran tahay in ay dhamaystirto heshiiska uu macalinkii hore ee kooxda Napoli ee Maurizio Sarri uu ku noqonayo badalka Antonio Conte. Sky Italia ayaa shaaciyay in Chelsea ay shaqadii kooxdeeda ka caydhisay Antonio Conte.
Inkasta oo ayna wali Chelsea si rasmi ah ugu dhawaaqin bixitaanka Antonio Conte laakiin Sky Italia waxa uu xaqiijiyay in Antonio Conte aanu hadda ahayn macalinka Chelsea oo uu baxay isla markaana la sugayo in maamulka Blues ay war saxaafadeed ka soo saaraan bixitaankiisa iyo waliba shaacinta in Maurizio Sarri uu badalay.
Tan iyo dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay Chelsea ayaa doonaysay in ay shaqada kooxdeeda kowaad ka caydhiso Antonio Conte balse waxay ka cago jiidaysay in ay bixiso lacagta magdhowga ah ee qandaraaskiisa lagu burburin karayay laakiin ugu danbayn markii ay isku hubsatay saxiixa Maurizio Sarri waxay Conte siisay lacagta uu xaqa ugu lahaa.
Antonio Conte ayaa iska diiday in uu iska casilo shaqada Chelsea maadaama oo aanu heleen wax lacag magdhow ah wuxuuna sugayay in shaqada laga caydhiyo haddii ayna maamulka Blues shaqadiisa ku qanacsanayn taas oo uu ugu danbayn ka helay wixii uu doonayay.
Antonio Conte ayaa sabtidii dib ugu soo laabtay xarunta tababarka Chelsea laakiin maanta oo khamiis ah waxaa ciyaartoyda Blues lagu war galiyay go’aanka uu Roman Abramovich shaqada uga caydhiyay Antonio Conte iyada oo waliba fasax laga siiyay tababarkii ay qaadan lahaayeen maanta.
Si kastaba ha ahaatee, Roman Abramovich ayaa shaqada kooxdiisa Blues u magacaabi doona Maurizio Sarri kaas oo haddaba laga shaqaynayo qandaraaska uu Stamford Bridge kula wareegayo, waxaana hadda si buuxda loogu dheg taagayaa war saxaafadeedyada ay Blues ku shaacin doonto bixitaanka Conte iyo imaatinka Maurizio Sarri.
Wixii warar ah ee ka soo kordha waxaad kaga bogan doontaan insha Allah wararkeena soo socda iyada oo haddaba si rasmi ah saxaafadu u xaqiijisay in Antonio Conte uu ka baxay Chelsea.